Nhengo dzeMDC Dzinorohwa kuMuzarabani
Chikunguru 12, 2010
Nhengo dzeMDC dziri kuMuzarabani mudunhu reMashonaland Central dzinoti Zanu PF iri kuita mhirizhonga pamberi pekushanya kwekomiti yeparamende iri kufambisa chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo, yeCOPAC.
Nhengo dzeMDC idzi dzinoti kurohwa kwakaitwa vatungamiri vebato ravo mudunhu ravo mukupera kwesvondo, kwave kuita kuti vatye kutaura zvavanoda pachaenda veCOPAC kunonzwa pfungwa dzavo.
Ukuwo, Zanu PF inoti yakazvipira mukuona kuti bumbiro remitemo idzva ranyorwa sezviri muchibvumirano cheGlobal Political Agreement, uye kuti hurongwa uhu huitwe murunyararo, zvisina kutysidzirana.
Mugwaro raburitswa nebato iri, Zanu PF inoti haisi kuzofa yakaregerera nyaya yemhirizhonga ichikanganisa hurongwa uhu, uye inokurudzira nhengo dzayo kuti dziite zvine hunhu, uye kuzvibata padzinenge dzichipa pfungwa dzadzo.
Bato iri rashoropodzawo masangano akazvimirira akaita seZimbabwe Election Support Network, Zimbabwe Peace Project neCrisis in Zimbabwe Coalition, ayo rinoti ari kusvibisa zita raro nekuburitsa manyepo pamusoro pehurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu.
Masangano akawanda ari kuongorora hurongwa uhu, pamwe nebato reMDC, ari kupomera Zanu PF mhosva yekutyisidzira vanhu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, kuti tinzwe divi ravo.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika, uye vari Programs Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vanoti Zanu PF yaburitsa mashoko aya sezvo zvinhu zviri kufamba zvakarerekera kwairi.
Zvichakadaro, mutauriri webato reMDC kuManicaland, VaPishai Muchauraya, vaudza Studio 7 kuti pane varume vaviri vakapambwa nemusi weSvondo manheru nevanhu vakanga vakapfeka magogorosi matema, vaine motokari chena.
VaMuchauraya vanoti VaLovemore Nyamana pamwe naVaPassmore Nyamana, vemu ward 36 kuMutare South, vakapambwa paMadanga Business Centre, mushure mekunge vabvunza mibvunzo ine chekuita nevakarwa hondo yerusununguko pamwe nenyaya yeminda, panguva dzekupa pfungwa dzavo pakunyorwa kwebumbiro idzva.
Chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu chakambomiswa svondo rino kuitira kuti nhengo dzeparamende dzinge dziripo panovhurwa dare reparamende neChipiri nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Hurukuro naVaPedzisai Ruhanya